Zamzam Foundation oo Muqdisho iyo gobolada ka wadda gurmadka dadka abaaruhu saameeyeen - Hablaha Media Network
Zamzam Foundation oo Muqdisho iyo gobolada ka wadda gurmadka dadka abaaruhu saameeyeen
HMN:- Markii Gobolada dalka ay si xoogan u saameysay abaartu waxa ay sababtay in dad iyo duunyaba ay ku dhammaadaan, hey’adda Zamzam ayaa bilaawday in ay u gurmato dadka abaartu ku dhufatay waxaana ay howlo isugu jira raashin qeybin, dawo iyo biyo dhaamin ka sameysay Gobolada dalka, Meelaha ugu daran dhanka abaarta oo hey’addu deeqda gaarsiiyey waxaa ka mid ah Degaanada Somaliland, Puntland, Gobolada Baay, Bakool, Shabeelaha Hoose, Shabeelaha dhexe iyo Gobolo kale.
Meelaha qaar hey’addu waxa ay ka furtay Xarumo caafimaad oo dadka lagula tacaalo maadaama cudurro shubanku uu ka mid yahay ay ka dilaaceen deegaanada qaar sidoo kalana waxa ay si joogto ah Zamzam Foundation u wadaa biyo dhaamin.
Maanta 500 qoys oo ka mid ah qoysas kumanaan ah oo Degmada Kaxda soo gaaray ayey zamzam u qeybisay deeq isugu jirta BUR, BARIIS, SOKOR, CAANO, SALIID iyo TIMIR waxaana qoysaska ka faa’iideystay qaarkood ay Kaxda soo gaareen maalin kahor.
C/qaadir Maxamed Hiraabe Gudoomiyaha Guddiga Barakacayaasha ee Zamzam foundation ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan gurmadka ay u sameynayaan dadka barakacayaasha ah iyo kuwo kusugan deegaanadooda oo Magaalooyinka soogaari waayey, waxaana uu intaas ku daray in Zamzam ay u taagan tahay u gurmashada dadka abaartu saameysay.
Maamulka Degmada Kaxda ayaa isna ka mahadceliyey deeqda raashinka ah ee dadka degmadaas lagaarsiiyey, C/naasir Xasan Cali Gudoomiyaha kuxigeenka Degmada Kaxda sidoo kalana ah Gudoomiyaha Guddiga barakacayaasha ee Degmada ayaa sheegay in deeqdu ku soo aaday xilli dadku ay aad ugu baahnaayeen.
“ shalay ayaan Muqdisho imid waxaan kasoo lugeeyey Diinsoor waana ku faraxsanahay deeqdan raashinka ah ayey tiri Muusaay Cabdi” oo duruuf adagi ka muuqatay.
Gurmadka hey’adda Zamzam waxa uu jawaab u noqonayaa baaq Madaxda dalku ay dhowr mar ku celiyeen oo ahaa in si deg deg ah loogu gurmado dadku abaartu dhibaatada ku heyso.